4G कसरी चलाउने ? यी हुन् ७ तरिका – Deshko News
Home » आर्थिक » 4G कसरी चलाउने ? यी हुन् ७ तरिका
4G कसरी चलाउने ? यी हुन् ७ तरिका
नेपाल टेलिकमले आइतबारबाट चौथो पुस्ताको मोबाइल इन्टरनेट सेवा 4G लन्च गरेको छ । तत्काललार्इ यो सेवा काठमाडौं र पोखरामा मात्र उपलब्ध हुनेछ ।
फाेर जी सुरू भएसँगै कसरी चलाउने भनेर तपार्इ साेचिरहनु भएकाे हाेला । अाउनुहाेस् 4G कसरी चलाउने भन्ने तपार्इकाे जिज्ञासालार्इ यहाँ समाधान गर्ने काेसिस गरिएकाे छ ।
तपार्इकाे मोवाइलमा 4G चल्छ कि चल्दैन यसरी चेक गर्नुहाेस्
तपाईंको मोवाइल फोनको नेटवर्क सेटिङमा गई फोनले कुन-कुन प्रविधिमा काम गर्छ हेर्न सकिन्छ । उपलब्ध बिकल्पमध्ये 4G/LTE रहे नरहेको यकिन गर्नुहोस् ।
साथै नेपाल टेलिकमको नेकवर्कमा 4G/LTE सेवा सुचारु गर्नका लागि मोबाइलले १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा काम गर्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न फोनको स्पेसिफिकेसन हेर्नुहोस् ।
तपार्इकाे सिममा चल्छ कि चल्दैन कसरी थाहा पाउने ?
सेज सुरू गर्न कति पैसा लाग्छ ?
कत्तिकाे महंगो छ ?
3G भन्दा धेरै गुणा फास्ट हुने भएकाले महंगो होला कि भन्ने हुनसक्छ । तर, फोर जी सेवा 3G सेवाकै दरमा उपलब्ध गराइने टेलिकमले जनाएको छ ।
नेपाल टेलिकमले आफ्ना ग्राहकहरुलाई बिभिन्न प्याकेजहरु नियमित उपलब्ध गराउँदै आएको छ । प्याकेजका बारेमा टेलिकमको आधिकारिक वेवसाइटमा अवलोकन गर्न सकिनेछ ।
पहिले लिएकाे डाटा प्याकेज के हुन्छ ?
साथै 4G सेवा सम्वन्धी कुनै जिज्ञासा भएमा ग्राहक सेवा केन्द्रको नम्बर १४९८ मा सम्पर्क गरेर पनि बुझ्न सकिन्छ ।
फोर जी कुन–कुन मोबाइलमा चल्छ ?